Wariye Hanad Cali Guuleed oo isagoo gacmaha ka xiran lagu arkay beer ku taalla Afgooye – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wariye Hanad Cali Guuleed oo isagoo gacmaha ka xiran lagu arkay beer ku taalla Afgooye
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in wariye Hanad Cali Guuleed oo maalintii shalay ay koox hubeysan ka afduubteen duuleedka magaalada Muqdisho maanta lagu arkay isagoo gacmaha ka xiran beerta Naasir oo ku taalla degmada Afgooye.
Wariye Hanad Cali Guuleed oo ka tirsan wariyaasha ka howlgala idaacadda iyo Tv-ga Goobjoog ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in markii la afduubtay kadib jirdil aad u xoogan loo geystay.
Maamulka degmada Afgooye ee gobolka Sh/hoose oo gaaray goobta wariyaha lagu soo tuuray ayaa la sheegayaa inay halkaasi ka qaadeen, waxaana cabsi aad u xoogan arrinkaan ka muujiyay wariyaasha ku sugan magaalada Muqdisho oo markii horeba bartilmaameed ahaa.
Illaa iyo haatan lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay afduubkaan loo geystay wariye Hanad Cali Guuleed, iyadoona sidoo kale aan la ogeyn cidda rasmiga ah ee ka dambeysay afduubkiis.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer C/raxmaan Yariisow ayaa sheegay inay farxad weyn tahay in wariye Hanad Cali Guuled isagoo bed-qaba dib loo arko islamarkaana uu kasoo baxay gacanta kooxihii afduubka u geysatay.
“Waxaa farxad weyn ah in wariye Hanad Cali Guuleed uu kasoo baxay gacanta kooxaha afduubka u geystay, waxay dowladda federaalka arrinkaan ku sameyn doontaa baaritaan xoogan, kadibne sharciga ayay horkeeni doontaa kooxihii falkaasi ka dambeeyay” Sidaasi waxaa yiri wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer C/raxmaan Yariisow.